[IMIBONO] Ukhozi lubulala thina emahostela ngoNgizwe | Isolezwe
[IMIBONO] Ukhozi lubulala thina emahostela ngoNgizwe
EZEMISAKAZO / 1 November 2018, 4:46pm / Ubunye bamaHostela
MHLELI: SinguBunye bamaHostela sibona uKhozi okuwumsakazo esiwulalela kakhulu futhi onabalandeli abaningi sengathi lubulala thina emahostela. Sisho ngoba sidlala kakhulu umculo kamaskandi okwaqalwa uBhodloza ukuwufaka emizweni yabantu, kwafika uTshatha noNgizwe bawukhuphula kakhulu.
Lo mculo ubungadlalwa yintsha ngoba bekuthiwa owabantu abadala, ubungadlalwa emalokishini kuthiwa owezimpatha, ungadlalwa ezikhungweni zemfundo ephakeme ngoba bekuthiwa owamabhinca.
Sicela abaphathi bomsakazo babuyekeze isinqumo sabo, uma enecala sicela kuhlalwe phansi kulungiswe ngenhloso yokucabangela umphakathi ngoba abantu abafana noNgizwe bayadingeka emphakathini nabaculi bakamaskandi kuningi abakuzuzile kanti yikho nje ngo-2016 unyaka wehlukaniswa ingoma kamaskandi.
SiwuBunye bamaHostela siyahambisana kakhulu nemashi ehlelwa abaculi bakamaskandi futhi sithi nabahlali basemahostela abafisa ukuba yingxenye yemashi siyabakhulula uma abaphathi bengalusukumeli lolu daba. Sizimisele ukusukuma sibanyundele kubantu senze nokuthi kudutshwe imicimbi ehlelwe uKhozi FM.
Okhulumela inhlangano yoBunye BamaHostela